ICabaña Tecolote, imbonakalo entle yolwandlekazi lwepacific - I-Airbnb
ICabaña Tecolote, imbonakalo entle yolwandlekazi lwepacific
Igumbi lakho lokulala e indlu yamaplanga sinombuki zindwendwe onguEntremares
ILa Cabaña Tecolote yikhabhathi yendalo eselwandle. Ikwiqonga elingaphezulu kweemitha ezi-2 ukuphakama, ukuze ukusuka kwindawo yayo ube nombono omangalisayo woLwandlekazi lwePasifiki. Ijikelezwe yindalo, leyo kunye nesandi esikufutshane solwandle siya kukwenza ukuba uphile ngamava angenakulibaleka. Uyakonwabela ezona mbono zintle zale ndawo usuka ebhedini yakho.
Sintywiliselwe kwindalo, unokufuna iimpahla ezitofotofo, i-sunscreen kunye neyeza lokugxotha iingcongconi. Kwisiqithi akukho grosari, iivenkile okanye ii-ATM, sincoma ukuba uzise into oyifunayo kunye nawe.
Ukutya okanye isiselo asivunywa, sinebhari kunye nendawo yokutyela enamaxabiso afikelelekayo avulwa ukusuka ngo-8 am ukuya ku-8 pm.
Nceda usazise ukuba unayo nayiphi na ukutya okanye iimfuno ezikhethekileyo ekufuneka uzilungiselele kwaye sikukhonze ngeyona ndlela ilungileyo.
Ukuba ufika ngemoto, unokupaka kwindlu kaDon Ricardo iipeso ezingama-30 imini nobusuku obungama-30, ubukela iiyure ezingama-24 ngosuku.
Ukuba ufika ngesithuthi sikawonke-wonke, sinokukunika iteksi ethembekileyo eya kukukhwelisa e-Tonalá kwaye ikubeke kwindawo ye-pier malunga ne-250 pesos ngexesha lasemini.
Siyakwazisa ukuba ukuya e-Entremares kuyimfuneko ukuwela ukuya esiqithini, ixabiso lephenyane li-$ 70 ngokuwela ukusuka kwi-7: 30 am. ngo 6:00pm. Ngaphandle kwezi yure iindleko yi-$ 200 ngokuwela
Kwi-Entremares sinamanzi ahlambulukileyo kwiishawa, amanzi okusela, umbane, umqondiso we-4G weselula ukuze uhlale ukhululekile, nangona kunjalo asiyeki ukuba kwindawo ekude, ngoko ezi nkonzo zinokungaphumeleli ngamanye amaxesha. Siwubulela kakhulu umonde wakho.